Showing 121-140 of 1,905 items.
सिरहा,फल्गुन ६ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनालाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन र सेनामा अलग्लै इन्टलिजेन्स विभाग खडा गर्ने व्यवस्थासहितको &lsquo;सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेय
दुई सांसदको निधनमा राष्ट्रियसभाबाट शोक प्रस्ताव पारित
सिरहा,फाल्गुन ५ गते । राष्ट्रियसभाले दुई जना सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले नेपाली काँग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य दुर्गा उपाध्याय र पहिलो संविधानसभा सदस्य सिद्धार्थकुमार सोमानीक�
मासुको मूल्य बढाउन चलखेल गर्नेलाई कालोबजारी मुद्दा
सिरहा,फाल्गुन ५ गते । कुखुराको मासुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न चलखेललाई कालोबजारी ऐनअन्र्तगत कारबाही गरिने भएको छ । विभागमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले कारबाहीक�
सिरहा,फाल्गुन ४ गते । सर्वोच्च अदालतले नाबालकले नाबालिकालाई बलात्कार गरे पीडकका बाबुआमाको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि पीडिकका बाबुआमाको नाममा सम्पत्ति नभए पीडित राहत कोष व�
सिरहा,फाल्गुन ४ गते । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गर्ने हुनुभएको छ । दार्चुला उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आजदेखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रमपछि उह�
चीनको वुहानबाट नेपालीलाई ल्याउन उड्यो विमान
सिरहा,फाल्गुन ३ गते ।&nbsp;चीनको वुहानबाट नेपालीलाई लिन नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनतर्फ उडेको छ । आज उडेको विमान आइतबार बिहानै त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने छ । हिजो शुक्रबार क्वारेन्�
प्रकाशित मितिः फाल्गुन 3, 2076
ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्ने
सिरहा,फाल्गुन १ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रतिनिधिसभाबाट सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार संसदको समय लिएका छन्। प�
वुहानका नेपाली लिन वाइड बडी जहाज शनिबार पौने ३ बजे उड्ने
सिरहा,फाल्गुन १ गते । चीनको वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई उद्दार गर्न पर्सि शनिबार दिउँसो २ः ४५ बजे नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चीनको वुहान जाने भएको छ। वुहान जाने टोलीमा ३ पाइलट, ६ क्याबिन क्रु, २ इन्जिनियर, १&ndash;१ जना फ�
२८ वर्षमा चार हजार एक सय घन्टा उड्यो सेनाको ‘एल्लोइड थर्ड’ हेलिकोप्टर
सिरहा,फाल्गुन १ गते । नेपाली सेनाको &lsquo;एल्लोइड थर्ड&rsquo; हेलिकोप्टरले २८ वर्षमा ४ हजार १ सय २१ घन्टा उडान गरेको छ । यो अवधिमा ९ हजार ७ सय ५२ पटक ल्याण्डिङ गरेको छ । अन्तिम पटक २ चैत २०७५ मा होलिकोप्टरले उडान भरेको थियो । करिब एक वर्षद�
सिरहा,फाल्गुन १ गते । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र विद्रोहका घाइते तथा अपाङ्गहरुलाई एनजीओको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा स
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
सिरहा,माघ २९ गते । बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग �
सगरमाथा सम्वादमा सहभागि हुन ओमानका मन्त्रीलाई राजदूतले दिइन् निम्तो
सिरहा,माघ २९ गते । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले ओमानका वातावरण तथा पर्यावरण मन्त्री मोहम्मद विन सलिम विन सेद अल टोवीसँग भेट गरेकी छिन। भेटका क्रममानेपाली राजदूत पराजुलीले आगामी अप्रिल २ तारिखदेखि ४ तारिख�
जनतालाई पासबिनै सिंहदरबार छिर्न दिनुपर्छ: सांसद चौधरी
सिरहा,माघ २९ गते । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले सुरक्षा जाँच गरी जनतालाई सिंहदरबार छिर्न दिनुपर्ने बताएकी छन्। पासको व्यवस्था मिलाउँदा जनताको धेरै समय खेर गएको भन्दै उनले राष्ट्रिय परिचय पत�
Breaking त्रिभुवन विमानस्थलमा आगलागी
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलमा आगलागी भएको छ । विमानस्थलको कफि सफमा आगलागी भएको विमानस्थलका एसपी दान बहादुर मल्लले जानकारी दिए । &nbsp; &nbsp;टर्मिनलको यात्रु प्रतिक्षालयमा पनि आगलागी छ । उनका आनुसार आगलागी के कारणले लाग्यो अनुस�
डोजरले जथाभावी सडक खने, नियमन गरौं : उपप्रधानमन्त्री
सिरहा,माघ २६ गते । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जता मन लाग्यो त्यतै बाटो खन्ने डोजर संस्कृतिको नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले व�
सिरहा,माघ २६ गते । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कानूनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको छ । एनआरएनले जग्गा किन्दा परेको रकम फिर्ताका लागि पनि कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ ।